Mozilla dia mandefa Firefox VPN any amin'ny firenena 5 amin'ny $ 4,99 amin'ny Android | Androidsis
Mozilla's Firefox VPN Azo zahana isam-paritra amin'ny Android izao
Amin'izao fotoana izao, ny VPN dia fironana ary io no fomba tsara indrindra hiarovana ny fiainantsika manokana. Raha etsy ambony dia miaraka Mozilla's Firefox VPN tsara kokoa noho ny tsara, satria mifampiraharaha amin'ny orinasa iray miaro ny mpampiasa amin'ny rindrambaiko izahay.
Mozilla dia efa miasa amin'ny VPN anao hatramin'ny 2018 ary efa nandefa iray amin'ny Android izy io hanombohana fitsapana henjana bebe kokoa alohan'ny hahatongavan'ity beta ity. Androany dia nanambara izy fa ny serivisy VPN misy karama dia misy any amin'ny firenena sasany.
Voalohany indrindra milaza fa tsy maintsy miandry an'ireto faritra ireto isika, satria amin'izao fotoana izao ny Firefox VPN misy any Etazonia, Canada, United Kingdom, Singapore, Malaysia, ary New Zealand. Ho an'ity fararano ity isika rehefa mety hanana azy io eto Espana.
Miresaka momba ny Firefox VPN izahay a serivisy premium amin'ny vidiny $ 4,99 isam-bolana ho an'ny fifandraisana 5 miaraka, mpizara any amin'ny firenena mihoatra ny 30, ary mampanantena i Mozilla fa tsy hanaraka na hivarotra ny fihetsika fitetezam-paritrao izy io.
Mozilla's VPN tsy mitovy amin'ny hafa amin'izany tsy mifototra amin'ny OpenVPN na IPsec izy io, fa amin'ny protokol WireGuard vaovao, ary mampanantena hafainganam-pandeha haingana noho ny fahombiazan'ny kaody. Ny iray amin'ireo hatsaram-panahin'ny Firefox VPN dia ny fampiasana azy mora foana, ary fantatr'i Mozilla fa raha te hahatratra mpampiasa marobe izy ireo dia mila azy ireo tsy handany fotoana amin'ny toe-javatra teo aloha. Izany hoe, tsindrio ny bokotra iray ary efa manana ny tambajotra VPN vonona sy miasa ianao.
Raha any amin'ireo firenena voalaza etsy ambony ianao dia azonao atao ny misintona ny client Windows avy amin'ity rohy ity ary miandry ny fotoana handefasana azy any Espana ao anatin'ny volana vitsivitsy. ny Firefox VPN izay tonga mazoto ho tonga iray amin'ireo VPN fantatra indrindra ary izany dia manokatra varavarana ho an'ireo mpampiasa sasany izay manana nahita ny olanao tamin'ny fametrahana VPN hafa.
Mozilla VPN - VPN azo antoka, tsy miankina ary haingana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Mozilla's Firefox VPN Azo zahana isam-paritra amin'ny Android izao
Eny, manana opera maimaim-poana ny opera ary miasa tsara. Tsy maintsy manao orinasa mazava ny Firefox ...
Eny, fa raha ny VPN dia handeha handoa vola azo antoka aho. Ary satria Mozilla, 100% azo antoka amin'ity raharaha ity.
Orinasa sinoa ny Opera, ka azo itokisana. Araka ny nolazain'i Manuel, raha mitady VPN ianao ary mankafy ny zavatra atolotray antsika, tsara kokoa ny mandoa azy, raha tsy izany dia hiafara amin'ny tsena ny angon-drakitrao.
Nanambara ny Oppo A12s: 6,2 "Panel, Helio P35 ary ColorOS 6.1